Redmi Note9Pro နဲ့Redmi Note9Pro Max မှာnew variantsထွက်ရှိလာ…. — Anycall Mobile
Redmi Note9Pro နဲ့Redmi Note9Pro Max မှာnew variantsထွက်ရှိလာ….
By Nang Ei July 28, 2020 1 Min Read
Redmi Note9Pro series အတွက် new variants ဒီနေ့ပဲ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Redmi Note9Pro 4GB RAM + 128GB Version ထွက်ရှိလာတော့မယ့်အချိန်မှာပဲ Redmi Note9Pro Max 8GB RAM + 128GB versionကို ချပြခဲ့တာပါ။
Redmi Note9Pro 4GB + 128GB versionကို ဒီနေ့‌ နေ့လည် Amazon India နဲ့ Mi.com မှာ (~$214) မြန်မာငွေနဲ့ခန့်မှန်းချေ (၃၀၀၀၀၀) ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့စတင်ရောင်းချတော့မယ်လို့ သိရပြီး အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Redmi Note9Pro Max 8GB+128GB ကိုတော့ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဇူလိုင် ၂၉ရက်နေ့မှာ (~$267) မြန်မာငွေ (၄၀၀၀၀၀) ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note9Pro series ကို မတ်လတည်းက အိန္ဒိယမှာ Announce လုပ်ခဲ့ပြီး Pro ရော Pro Max ရောနှစ်မျိုးလုံးမှာ 1080 X 2040 display ၊ Snapdragon 720G processor နဲ့ 5020mAh battery ကိုသုံးထားပေမယ့် Camera ပိုင်းမှာတော့ Note9Pro က 48MP quad rear camera setup နဲ့ 16MP selfie camera ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားကာ Note9Pro Max မှာတော့ 64MP quad rear camera setup နဲ့ 32MP selfie camera ကိုအသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Fast Charging System မှာလည်း Note9Proကို 18W fast chargingနဲ့ supportပေးထားပြီး Note9Pro Max ကိုတော့ 33W fast charging လေးကို support ပေးထားတာပါ။ Variant Version တွေမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်လာလေ မလားမသိရသေးပေမယ့် တကယ်လို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့ Redmi ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ရွေးချယ်စရာ တိုးလာအုံးမှာပါ။
ဆိုတော့ Note9Pro Series သာ မြန်မာကို ရောက်လာခဲ့ရင်‌ ပရိတ်သတ်ကြီး ဘာကိုရွေးချယ်မလဲ?? Comment မှာဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအုံးနော် …..
Note9seriesRedmi
Author Nang Ei